Divnomorsk ezikhangayo futhi endaweni ezungezile
Divnomorsk - emangalisayo enhle resort umuzana Krasnodar Territory. Njalo ngonyaka izinkulungwane zezivakashi ukuphumula kulo lonke elaseRussia kanye wangaphambili amazwe CIS. Izikhangibavakashi Divnomorsk umxhwele abahambi ne ubuhle bayo kanye nomlando ezithakazelisayo. Yaqalwa ngo-19 leminyaka isiphetho ogwini kolwandle cishe ngokushesha ke eyaduma ngokuthi "Gelendzhik Ezingamanga". Lokhu kungenxa yokuthi emakhulwini amaningi eminyaka edlule, amatilosi elahlekile wathatha Divnomorskoe ethekwini Gelendzhik. Edolobheni emoyeni Akumangalisi ahlanzekile, flora ocebile nezilwane ezihlukahlukene, okuyinto ukuheha izivakashi. Kulolu shicilelo uzothola ulwazi ezithakazelisayo kakhulu mayelana Divnomorsk (izimpawu zendawo, izithombe, ukuzijabulisa).
Divnomorsk kubhekwe isiphetho imvelo. Itholakala kude amathrekhi omkhulu, ogwini nehlanzekile Black Sea. Yingakho, ekhuluma ezikhangayo Divnomorsk, umuntu akakwazi bayakhohlwa ubuhle bemvelo baleli esifundeni.
Emithambekeni amagquma ugu elitholakala indawo emangalisayo enhle - Pine Grove. Lapha sikhule ezingavamile Pitsunda zikaphayini. Nansi afanayo enkulu kunayo yonke eYurophu izitshalo relict!
Divnomorsk (Krasnodar esifundeni) Sekuyisikhathi eside kwaziwa zayo indawo enhle. Eduze edolobheni iyona edume "Big Blue". Lapha zonke izivakashi letingabhukusha amanzi ehlanzekile futhi ujabulele ukubukwa Amazing kolwandle ebhange okusezingeni eliphezulu.
Ngaphezu kwalokho, endaweni Pine Grove Kukhona zokungcebeleka eziningi kanye nokungcebeleka izikhungo. Lapha njalo ngonyaka wavakashela ngamakhulu abantu baseRussia abafuna ukuthuthukisa impilo yazo futhi senqene ukusiza ekuphileni kwansuku zonke edolobheni.
Mayelana nezinye zokungcebeleka abadumile ngokulinganayo futhi enhle Divnomorsk ukufunda ku.
Rock Span - omunye ethandwa kakhulu izivakashi izindawo eseduze Divnomorsk. Lapha zabahamba ihlelwe Hike · Izinkambo ababehamba ngezikebhe.
Idwala esime oseyili - indalo emangalisayo bemvelo. amahle lapha kusihlwa, lapho ilanga lishona Ikakhulukazi. Ngalesi sikhathi, izivakashi ngasinye bazokwazi ukubukela isithombe emangalisayo imisebe kwelanga edabula imbobo edwaleni.
Kusukela Divnomorsk ihlele ukuthi Waterfalls Pshadskim. Lapha izivakashi banethuba eliyingqayizivele hhayi kuphela ubunyoninco amaningi nezindawo ezinhle, kodwa futhi uphumule emoyeni opholile kwelinye zokungcebeleka.
Lesi sivumelwano Pshada 100 kuyinto izimpophoma amahle ngaphezulu. I enkulu babo isendaweni River Olubomvu okuthiwa Olyapkin. Enye impophoma elihle endaweni Igilebhisi Creek.
dolmens - In eduze Divnomorsk izinsalela yamandulo atholakele. Okufanayo ematsheni obumba izindlu ziye zatholakala e-England, eMexico nase-Egypt. Umnyaka zalezi zakhiwo safinyelela ngaphezu kweminyaka eyinkulungwane! Ziyakwazi abagcini izimfihlo esidlule. Abanye ososayensi bakholelwa ukuthi dwarfs wahlala khona olwalukhona eplanethini yethu. Nokho, abacwaningi abaningi bavumelane nombono wokuthi dolmens wakhonza njengephayona omngcwabo izindlu 2-3 ayizinkulungwane. BC. e.
Kusukela Divnomorsk endaweni engaqondakali ematsheni ilungiselelo engafinyelelwa ngezindlela eziningana. Umzila uhambo "Jeeping" linikeza izivakashi baqhubeke uhambo olujabulisayo, phakathi kwesikhathi lapho ungabona hhayi kuphela zomhlaba ezidumile kunazo Divnomorsk futhi Gelendzhik. Ngaphezu kwalokho, bheka itshe dolmens kungenzeka ngesikhathi horse riding eziluzungezile komuzi.
Divnomorsk (Krasnodar esifundeni) idume hhayi kuphela ubuhle bemvelo, kodwa futhi esikhumbuzo yezakhiwo, etholakala ngqo emzini.
Kwenezele zintathu-Sergeeva Lavra - esontweni esiyingqayizivele eyakhelwe ngasekupheleni XX leminyaka. Lapha izinsalela St. Sergiya Radonezhskogo nomfanekiso waso.
Umuzi lo wezinzalamizi futhi Synodal maphakathi Lobu-Orthodox LaseRussia. Naphezu kweqiniso lokuthi kwasivulela eminyakeni embalwa edlule, namhlanje, nazi izitho lebalulekile yahulumende isonto eningizimu.
Divnomorsk: Izikhangibavakashi & Ezokuzijabulisa
Namuhla e Divnomorsk zonke izimo ngoba ukuhlala ukhululekile futhi ongasoze. Phakathi komuzi izindlu boarding eziningana futhi sanatoria nezikhungo zezempilo.
Ngo Divnomorsk wavula epaki amanzi, ukuvakashelwa okuyinto surely zikhunjulwe zabahamba abasha. Ngaphezu kwalokho, lo muzi has a lot of amathilomu, kuma-nightclub, zokudla, boutiques, nokunye. D.
Izindawo ezinhle kakhulu Ukraine: incazelo, izivakashi kanye namaqiniso ezithakazelisayo
The best echibini edolobheni e-US
Heviz - echibini ngamanzi ezishisayo
Nomthandazo Arhangelu Mihailu. Nomthandazo ku Miracle Monastery Emphemeni - umthandazo insindiso
"Tolperisone" lisho ukuthini. Yokusetshenziswa
Vanilla ukhilimu: iresiphi
Soul shards: lokho silahlekelwa ngeminyaka?
Smartphone Qumo Quest 570: incazelo, ukubuyekezwa, Ukucaciswa
Ifenisha okwesikhathi ephasijini encane
Indlela yokuvula i-cr2 noma Thola izixazululo zokusebenza ngefomethi ecacile yekhamera ye-Canon yama-OS ehlukile